အောက်တိုဘာလ 2017 | 20 ၏စာမျက်နှာ 105 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 20)
Vislink အသံလွှင့် RF ထံမှ HEVC 400,000k UHD HCAM ကြိုးမဲ့ကင်မရာစနစ်များများအတွက် $4အမိန့်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Sarasota, FL, အောကျတိုဘာ 27, 2017 - xG နည်းပညာ, Inc ( "xG" ဒါမှမဟုတ် "ကုမ္ပဏီ") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), ထုတ်လွှင့်ဖို့ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်နှင့်ပုဂ္ဂလိက ဝေဖန်ဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းကွန်ယက်များ, ယင်း၏ Vislink စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 400,000 HEVC (High အသုံးဗီဒီယို Coding) 10K UHD HCAM များအတွက် $4တန်ဖိုးရှိတစ်ခုအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ...
အသှေးကိုကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး Technician အ
ရာထူး: သွေးကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး Technician အကုမ္ပဏီ: ကြက်ခြေနီတည်နေရာ: Oakland, CA အမေရိကန်ယောဘသည်ဖော်ပြချက်: သင်တို့ပြုအလုပ်အတွက်ခြားနားချက်အောင်ရှာဖွေနေပါသလား? ဒီတော့လျှင်, ငါတို့သည်အမေရိကန်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကို join ဖို့သငျသညျဖိတ်ခေါ်! Oakland တည်ရှိသောကျနော်တို့ကဒေသအနှံ့ဆေးရုံများသွေးပေး။ တစ်နိုင်ငံလုံးကျနော်တို့၏သန်း 6.5 ကျော်ယူနစ်စုဆောင်း ...
Tobias Dreier #SMPTE2017 @smpteconnect
Tobias Dreier ကျွန်တော်တို့ကို, G & D ကိုမြောက်အမေရိက SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ်ပြောပြသည်။
ရှင်ဇိုအာဘေး Zerbib #SMPTE2017 @smpteconnect
ရှင်ဇိုအာဘေး Zerbib ကျွန်တော်တို့ကို VS SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ် TAG ပြောပြသည်။
Troy Davis ကနှင့် Scott Barella #SMPTE2017 @smpteconnect
Troy Davis ကနှင့် Scott Barella Utah သိပ္ပံ SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာအသစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
Savva Mueller #SMPTE2017 @smpteconnect
Savva Mueller ကျွန်တော်တို့ကို Masstech နှင့် SGL SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာကိုပြောပြသည်။
မာတင် Holmes #SMPTE2017 @smpteconnect
မာတင် Holmes ကျွန်တော်တို့ကို Rohde & Schwarz SMPTE 2017 မှာဖေါ်ပြခြင်းသည်နည်းပညာကိုပြောပြသည်။
Sid ဖြတ် #SMPTE2017 @smpteconnect
Sid ဖြတ်သဟဇာတ SMPTE 2017 မှာပြသထားတယ်နည်းပညာရှင်းပြသည်။
20 ၏စာမျက်နှာ 105«ပထမဦးစွာ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး»